Wasaarada Waxbarashada iyo Tacliinta sare oo furtay Mashaariic laga hirgaliyey iskuulo cusub magaalooyinka biyo cade iyo ceel madoobe oo hoos yimada degmada Eyl ee Gobolka Nugaal. – Ministry of Education in Puntland
By editor	/ December 19, 2018
12/18/2018- Wafti balaran oo hogaaminayo Wasiirka Wasaaradda Waxbarshada iyo Tacliinta sare Abshir Yuusuf aw ciise iyo agaasimaha Guud Gudoonka Waxbarashada Gobolka Nugaal, Gudoonka Waxbarashada Degmada Eyl iyo Haya’dda World Vition ayaa waxaa sifiican lagu soo dhaweeyey magalooyinka kala ah Qarxis, Biyo cade, ceel madoobe.
shacabka ku nool magalooyinka ayaa si diiran u soo dhaweeyey masuuliyiinta ka socotay Wasaarada Waxbarashada iyo Hay’adda World Vition.
Ujeedada safarka ayaa ahaa in la soo furo mashariicdii dhismayaasha iskuulada cusub oo laga hirgaliyey bishii la soo dhaafay ay wada wadeen Wasaarada Waxbarshada iyo Tacliinta sare iyo Hay’adda World vition.
Gudomiyaha Degmada Waxbarshada Eyl Xaaji Digir ayaa ayaa ka warbixiyey dhismaayasha Cusub ee iskuulada tuulooyinka laga dhisay isagoo sheegay in baahi badan ka haysatsy caruurta waxbarshada gaartay aysan haysan qolal ay wax ku bartaan balse maanta ay haleen fasalo dhamaystiran.
Gudoonka Waxbarashada Gobolka Nugaal C/samad shiikh Xaamid ayaa aad ugu mahad celiyey Hay’dda fulisay mashruucan dhismayaasha iskuulada tuulooyinka isga ku tilmaamay inay baahi badan ka dabooli karto caruurta yar yar.
waxaa kalo sheegay hay’adda World Vition in ay waxbadan ka qabatay guud ahaan Gobolka Nugaal iyadoo waxbarashada Gobolka Nugaal degmooyinkooda kor u soo kacayso dadka Waxbarshada gaaray.
Agaaasimaha Guud ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare Maxamed Cali Faarax farmayeeri ayaa markii hore kormeer ku tagay tuulooyinka hoos taga degmada Eyl isago oo markii hore soo ogaaday baahida ka jirta degaankas ay ahayd in u baahan yihiin Dugsiyo cusub, iyadoo ardayda meesha joogtana gaarayso 1500 arday in ka badan tuulo walba.
Agaasimaha Guud ayaa u rumeeyey riyadoodii inay helaan bulshada ku nool degaankaas iskuulo wax tar leh iyo agab casri oo ay ka mid yihiin kuraas iyo miisas, sabuurado, bugaag, iyo musqulo, barkado iyo macalimiin wax ku ool ah.
Agaasimaha ayaa si diiran ula hadlay Bulshada degaanka ku nool oo yiri tani waxay idiin tahay tusaale wanaagsan oo maanta waana aragteen caruurtiinii oo fasalo cusub wax ku baraneysa anagu balantayadii waa ka soo baxnay.
waana ogaydiin maalinta aniga iyo wasiirka idin imaanaynay inay caruurtiina geed hoostii wax lagu barayey. ayuu yiri Agaasimaha Guud.
Wasiir Abshir Yuusuf aw ciise oo ka hadlay furitaanka iskuulada cusub ee tuulooyinka hoos yimada degmada eyl ayaa yiri maha markii ugu horaysay aan ka furno iskuulo cusub degaankan.
Ardayday walba oo Puntland kaga nool tuulo iyo magaalo waa in uu helaa agab waxbarasho, Macalin dhamaystiran si loo helo arday tayo leh iyo waxbarasho fiican.
Wasiirka waxaa kale oo yiri,” waxaa aad u bogaadinayaa dadka tuulada ku nool inaysan dayicin dhismayaasha iskuulda oo ay xafidaan amaanada loo dhiibtay ciyaalkiina ku ogaatan waxbarashada.
Wasiirka Waxbarashada ayaa aad uga mahad celiyayey shaqalaha Waxbarshada hay’adda World vition isagoo amaanay sida dhabta ah ay ula shaqeeyaan Wasaarada Waxbarashada Puntland.
By: Deeq Hurevov Madaxa isku xirka Wasaarada Waxbarashada iyo Tacliinta sare.